Guri - Somalione
Soomaaliya horey ayay u socotaa!!! Mar kasta oo dadka shisheeyaha ahi ay maskaxdooda kusoo dhacdo Soomaaliya, waxaa u sawirma muqaal colaadeed, abaaro iyo burcad badeednimo. Laakiin maanta waxaa ka bilowday Soomaaliya hab-dhaqan ku dhisan maamul diimoquraadi ah, ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka iyo ka qeybgelinta dadweynaha maamulka siyaasasadda. Hay’adda Somali One waxay damacsantahay iney dhidibada u adkayso horumarkaan dimoquraadiyadeed iyadoo lagu dhiiragelinayo dhammaan muwaadiniintu iney ka qeyb qaataan hanaanka siyaasada ee dalka.
Markii ugu horeysay burburkii qaranka ka dib, ayaa waxaa sanadkii 2012kiiay gole ergo qaran ansixiyeen dastuurka kumeel gaarka ah, baarlamaanka oo dib loo habeeyey kana kooban 275 xubnood ayaa l oo dhaariyay xilalkooda, ka dibna madaxweyne lagu dhex doortay dalka gudahiisa. Sidoo kale Puntland iyo Somaliland waxaa ka dhacay marxalado kala-guur ah, xukuumado cusub ayaa la doortay, xildhibaano cusubna xilka ayaa loo dhaariyay.
Dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu u baahanyahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo dhameystiro oo loo helo dastuur rasmi ah oo lagu ansaxin doono afti dadweyne. Xukuumadu waxay bilowday hawlahan iyadoo kaashaneysa bulshada caalamka tasoo looga dan leeyahay sidii afti dadweyne loogu qaadi lahaa dastuurka ayna ku xigi doonto qabashada doorasho toos ah sanadka 2016. Laakiin si dadaalladan ay u noqdaan kuwa miro dhalah, waxaa muhiim ah in shacabka soomaaliyeed ay ka qeyb qaataan geedi socodkahawlahan oo weliba tixgelin gaar ah la siiyo dhalinyarada iyo barnaamijyada lagula tashanayo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed.